ပရိတ်သတ်တွေ ဘာပြောပြောဂရုမစိုက်ပဲနဲ့ ခရီးသွားမပျက်ပဲပျော်နေတဲ့ ယဉ်လတ် – Cele Top Stars
July 13, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပြန်ပဲအေးဆေးစွာနဲ့နေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူအနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ MWD ချန်နယ်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။ သူတင်တဲ့ပုံတွေ အောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေ ယဉ်လတ်ကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက် ပါဘူးတဲ့..။
” ရေငုပ်တဲ့အတွေ့ကြုံတွေ .. ကျောက်တောင်ပေါ်တွယ်တက်ခဲ့တာတွေ သင်ယူရရှိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဘဝအတွေ့ကြုံတွေပါပဲ . .ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အခက်ခဲတွေ အကောင်းအဆိုးတွေတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ အတူတူဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေဟာလည်း တစ်သက်လုံး သတိရစရာတွေဖြစ် နေမှာပါ ..#SoulHealing #Dive ..🌊🦋⚓️🤿🐠🐬#Adventure & Survive ! Beinga#diver forawhile ..🌊⚓️🤿🗺 .. #Life #experience #YinLet #ယဉ်လက်#YL ” လို့ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် တင်ထား ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း
သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိ်ုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ယဉျလတျကိုတော့ အားလုံးသိကွမယျ ထငျပါ တယျ။ နှဦေးတျောလှနျရေးမှာလညျး လုံးဝမပါဝငျပဲ ရငေုံနှုတျပိတျနေ ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှေ ဘယျလိုပဲ ဝဖေနျနပေါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပွနျပဲအေးဆေးစှာနဲ့နနေတောပဲဖွဈပါတယျ..။
ယဉျလတျဟာဆိုရငျ စဈတပျထောကျခံသူအနနေဲ့တငျမဟုတျဘဲ MWD ခနျြနယျအတှကျ အစီအစဉျတဈခု ရိုကျကူးထားပါသေးတယျ။ သူတငျတဲ့ပုံတှေ အောကျမှာလညျး ပရိသတျတှကေ ဝိုငျးပွီး ပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဘယျသူတှေ ဘယျလိုပဲ ပွောနပေါပစေ ယဉျလတျကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုကျ ပါဘူးတဲ့..။
” ရငေုပျတဲ့အတှကွေုံ့တှေ .. ကြောကျတောငျပျေါတှယျတကျခဲ့တာတှေ သငျယူရရှိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတတှေ ဟာ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ဘဝအတှကွေုံ့တှပေါပဲ . .ခရီးစဉျတဈလြှောကျ အခကျခဲတှေ အကောငျးအဆိုးတှတေဈဖှဲ့လုံးနဲ့ အတူတူဖွတျကြျောခဲ့တဲ့ အမှတျတရတှဟောလညျး တဈသကျလုံး သတိရစရာတှဖွေဈ နမှောပါ ..#SoulHealing #Dive ..🌊🦋⚓️🤿🐠🐬#Adventure & Survive ! Beinga#diver forawhile ..🌊⚓️🤿🗺 .. #Life #experience #YinLet #ယဉျလကျ#YL ” လို့ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှငျ တငျထား ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး
သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပျိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။